မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၂)
မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၂)
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Sep 18, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 24 comments
မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၁)
ပထမတန်းတွင် နှင်းဆီ၏အကြောင်းကို ပိုသိလာခဲ့သည်။ နှင်းဆီ၏အမေသည် မြို့တွင် နာမည်ကြီးသော ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်၍ အဖေသည် ချမ်းသာသော လူကုံထံတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတည်းသော အစ်ကိုမှာလည်း တစ်မြို့လုံးတွင် အတော်ဆုံးဟုဆိုနိုင်သည့် ထူးချွန်ကျောင်းသားဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အနှစ်ချုပ်လျှင် နှင်းဆီသည် မြို့မျက်နှာဖုံး၊ အထက်တန်းလွှာမိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်သည်။
နှင်းဆီ၏အခြေအနေကို သိလိုက်ရချိန်တွင် ၀တီတစ်ယောက် အားကျစိတ်များဝင်မိ၏။ ၀တီ့အဖေသည် ပုံနှိပ်စက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည်။ ပုံနှိပ်စက်သုံးခုလောက်သာရှိသော မြို့တွင် အဖေသည် အတော်ဆုံးဟု ဆိုနိုင်၏။ လုပ်ငန်းအခြေအနေကောင်းမွန်သော်လည်း ချမ်းသာသည်ဟု မဆိုနိုင်။ အဘွား၏ စီမံအုပ်ထိန်းမှု၊ အဖေ၏ အလုပ်ကြိုးစားမှုနှင့် အမေ၏ ဖြည့်ဆည်းပေးမှုအောက်တွင် ၀တီနှင့်မောင်လေးတို့နှစ်ယောက် လိုတရမဟုတ်သော်လည်း လိုအပ်သမျှတော့ ပြည့်စုံခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကလေးပီပီ နှင်းဆီ၏ ဂါဝန်လှလှများ၊ ချော့ကလက်ဝေဖာများကိုတော့ မက်မောမိသည်သာ။
ထိုနှစ်တွင် နှင်းဆီနှင့် ၀တီတို့ ပိုမိုရင်းနှီးလာခဲ့သည်။ စိတ်သဘောထားကောင်းလှသော နှင်းဆီ၏အမေက စာတော်သောဝတီ့ကိုလည်း ချစ်ခင်လိုလားခဲ့သည်။
“သမီး..၀တီ…နှင်းဆီလေးနဲ့အတူတူထိုင်နော်..သူက အိမ်မှာအငယ်ဆုံးဆိုတော့ အရမ်းဆိုးတယ်…သမီးက သည်းခံပေးနော်… စာလည်း အတူတူကြည့်ကြ သိလား… သမီးက စာတော်တော့ နှင်းဆီမသိတာတွေလည်း ပြောပြပေးနော်…နှစ်ယောက်သား ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြနော် သမီး…”
နှင်းဆီအမေ၏ ပြောစကားများကြောင့် ၀တီတစ်ယောက် နှင်းဆီနှင့်အတူတူထိုင်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဖွင့်စမှာတော့ နှစ်ယောက်သားက အဆင်ပြေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ နှင်းဆီ၏ ဗိုလ်ကျလိုစိတ်က ၀တီ၏ သည်းခံနိုင်စွမ်းထက် ကျော်လာခဲ့သည်။ ရန်ဖြစ်သည်က မကြာခဏ။ တစ်ခါတစ်ခါ လက်တွေအထိပါ ပါလာသည်။ ကျောက်သင်ပုန်းများ၊ ကွန်ပါဘူးများ၊ ပေတံများကလည်း ရန်ဖြစ်ကူပစ္စည်းများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပထမတန်းတွင်တော့ နှင်းဆီက ပထမ၊ ၀တီက ဒုတိယ ရရှိခဲ့သည်။
ဒုတိယတန်းအရောက်တွင်တော့ မည်သူက မည်သို့ ရိုက်ထည့်လိုက်မှန်းမသိသော အသိတစ်ခု ၀တီ့ခေါင်းထဲတွင် စွဲလာခဲ့သည်။ “နှင်းဆီနဲ့ဝတီက ပြိုင်ဘက်တွေ” ဟူ၍။ “ပြိုင်ဘက်ဆိုတာ ဘာလဲ…ဘာကို ပြိုင်ရမှာလဲ…”။ အမှန်တော့ အမှတ်ချင်း မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေသော ၀တီတို့နှစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းများကို ဆရာမများက ပြိုင်ဘက်ဟု သတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေအနေချင်း ပြိုင်စရာမရှိသော ၀တီသည်လည်း စာကိုသာ ဖိပြီး ကြိုးစားခဲ့သည်။ ပထမဆိုသည်မှာ အမြင့်ဆုံးဟု သိလာသည့်အချိန်တွင် ထိုပထမကို မက်မောလာ၏။ နှင်းဆီကို ကျော်နိုင်ဖို့ရာ ပထမသာလျှင် ပထမ ဖြစ်ပေသည်။
မည်သို့ပင်ကြိုးစားသော်လည်း ၀တီတစ်ယောက် ဒုတိယအဆင့်မှ တက်မလာခဲ့ပေ။ ပထမနှင့် ဒုတိယသည် ကပ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း တကယ်တမ်းတွင်မူ ဝေးကွာလွန်းလှပေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သိလာခဲ့သည်က ပိုက်ဆံချမ်းသာသော နှင်းဆီသည် အိမ်တွင် ဆရာမသီးသန်းဝိုင်းနှင့် စာသင်ရသည်။ ဘာသာရပ်အလိုက် သီးသန့်ဆရာမများနှင့် ထပ်မံသင်ခွင့်ရသည်။ မိဘနှစ်ပါး၏ အနီးကပ် ညွှန်ကြားမှုဖြင့် စာကျက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ညဘက်တစ်ယောက်တည်းစာကျက်၊ မနက်ဘက်ကျောင်းမသွားမီ တစ်နာရီခွဲခန့် ကျူရှင်တက်ရသော ၀တီတစ်ယောက် နှင်းဆီကို မမီသည်မှာ အဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ပေ။
တတိယတန်းစာသင်နှစ်တွင် ၀တီတို့နှစ်ယောက်ကြားရှိ ယှဉ်ပြိုင်မှုများ၊ အာဃာတများကို ပြင်းထန်လာစေသည့်အပြင် ၀တီ့နှလုံးသားထဲသို့ မနာလိုမှုဟူသော အမည်းရိပ်စတင်စွန်းထင်းစေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထိုနှစ်တွင် တတိယတန်းနှင့် စတုတ္ထတန်းမှ ထူးချွန်ကျောင်းသားများသည် မြို့နယ်ထူးချွန်စာမေးပွဲများကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရသည်။ ကျောင်းမိသားစုအဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်ဟူ၍ နှစ်ဆင့်ဖြေရ၏။ ကျောင်းမိသားစုအဖြစ် ကျောင်း (၅) ကျောင်း ယှဉ်ပြိုင်ဖြေဆိုပြီးချိန်တွင် ထုံးစံအတိုင်း နှင်းဆီနှင့် ၀တီတို့သည် ပထမနှင့် ဒုတိယနေရာတို့ကို ရယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။
မြို့နယ်အဆင့်တွင်မူ တစ်ကျောင်းမှ တစ်ဘာသာသာ မေးခွန်းထုတ်ရသည်။ ၀တီတို့ကျောင်းက ပထ၀ီဝင်ဘာသာ။ မိမိကျောင်းသာကို သာစေချင်သည့်စိတ်ဖြင့် ဆရာမက မေးခွန်းအချို့ကို ပြောပြခဲ့သည်။
သင်္ချာဖြေပြီး၍ ထမင်းစားနားချိန်တွင် ဆရာမက လှမ်းခေါ်ခဲ့သည်။ ၀တီတို့ရောက်သွားတော့ အဓိကထားကျက်ရမည့် စာအချို့ကို ရွေးပေးခဲ့သည့်အပြင်…
“ဒီမှာ..ဆရာမ မေးခွန်းတစ်ခု မေးထားတယ်… ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမှာ အမှတ်စဉ်တွေ ထိုးပေးထားတယ်… သမီးတို့ အကုန်မသိဘူး..ဒီတော့ ဆရာမရေးပေးထားတဲ့ နံပါတ်နဲ့ ဘေးက အဖြေတွေကို ဒီအတိုင်း ကျက်သွားလိုက်..”
၀တီတစ်ယောက် အနည်းငယ်တော့ လန့်သွားသည်။ သို့ရာတွင် အဖြေများကို ကျက်ရုံမက မြေပုံထဲက အညွန်းတွေကိုပါ မှတ်မိအောင် ကြည့်ထားလိုက်၏။ စာမေးပွဲဖြေသောအခါဝယ် ၀တီ့မှတ်ဥာဏ်သည်ပဲ ချွတ်ချော်လေလားမသိ။ မြေပုံထဲက အမှတ်စဉ်တွေက လွဲနေသည်ဟု ခံစားရသည်။ ဖျတ်ကနဲတွေးလိုက်မိသည်က ထိုပထ၀ီဝင်ဆရာမသည် နှင်းဆီ၏ စာကျက်ဂိုက်ဖြစ်သည်။ ဇဝေဇ၀ါအတွေးများဖြင့် ၀တီတစ်ယောက် ကျက်ထားသည့်အတိုင်း မဖြေတော့ဘဲ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ကိုယ် ထင်ရာကိုသာ ဖြေခဲ့တော့သည်။ နှင်းဆီကတော့ ယုံကြည်မှုအပြည့်ပုံစံနှင့် စာဖြေခန်းထဲက ထွက်လာ၏။
ဟယ်.. ၀တီ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မယ်နဲ့တူတယ်…
ဆရာမ က မေးခွန်းနဲ့ အဖြေကို လွှဲပြောင်းပြထားတာနေမှာ…
နှင်းဆီကိုတော့ အမှန်တွေဘဲ ပြောမှာပေါ့နော်…
ဟိ… မှန်မမှန်တော့ မသိဘူး… ခန့်မှန်းပေးသွားတယ်နော်…
ဖတ်ရတာ ကောင်းလာပီ.. ဆက်ရေးနော်…
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မ.. ဆက်ရေးနေပါတယ်ရှင့်…
သြော် စာမေးပွဲဖြေပြီး အမှတ်စာရင်းကို ချက်ချင်းမသိရသေးသလိုပါဘဲ လုံမလေးရေ။
မွန်မွန်ရေ ပြိုင်ဖက်ရှိမှ တိုးတက်တာလို့လည်း ပြောကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိုး ရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။
ဆက်ပါအုန်းလို့ ရေးတာမွန်မွန်ရေ ပြတ်ကျန်ခဲ့လို့ ကော်မကောင်းပြန်ဘူး
မွန်မွန့်ဘ၀ကလည်း ပြိုင်ဖက်ဆိုတာကြောင့်ပဲ ကြိုးစားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်… မဟုတ်ရင် မွန်မွန်က ငပျင်းရယ်….
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဂဇက် သို့ နေ့စဉ် ၀င်ဖြစ်နေရပါတော့သည်။
တကယ်တော့ လုံမလေးလည်း အားနာပါတယ် လေးလေးထူးဆန်းရှင့်… စာတွေက ခေါင်းထဲမှာပဲရှိနေပြီး စာရွက်ပေါ်နဲ့ ကွန်ပျူတာပေါ်ကို မရောက်နိုင်လေတော့…
စာမေးပွဲကြားထဲကကို မပြီးပြီးအောင် ရေးနေပါတယ်…
ကြိုးစားထား ငါ့တူမဂျီးရေ ..
နောက်တော့မှ အေးဆေး မန့်မယ် ငါ့တူမဂျီးရေ …
မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းဆိုတော့ မဆုံနိုင်ပေမယ့် ကြာလေဝေးလေတော့ မဖြစ်ဘူးပေါ့ …
ကျွန်မအတွေ့အကြုံထဲမှာတော့ ဆန့်ကျင့်ဘက်လေးတွေ များတယ် … ဆန့်ကျင်ရင်းကနေ ဝေးသွားလိုက်တာ ဘယ်လိုမှ ပြန်နီးစပ်အောင်လုပ်လို့မရတော့တဲ့ ရာဇ၀င်တွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ် …
ဪ ဒွတ်ခ၊………. တရား မရှိလိုက်တာ!
ဖတ်ရင်းနဲ့ ဆက်ပြီး ဖတ်ရင်ချင်နေပါတယ်…လုံမရေ… ၀တီရဲ့ လုပ်ရပ်လေး ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိချင်လှပါပြီ…. အပိုင်း ၃ ကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်…
အဲ့ဒီ စာမေးပွဲ အပြီးမှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ 
မောဟ အားပြိုင်မှု့ တွေဟာ ပိုပြင်းလာနိုင်ပါတယ်..
အားလုံးအစအဆုံးဖတ်ပြီးမှ ထပ်မန်းတော့မယ် အခုတော့ ဖတ်ဘဲဖတ်သွားလိုက်တော့မယ်နော်
နှင်းဆီ က ချာမ နဲ့ ပေါင်းပြီး ဝတီ့ကို လုပ်ကြံလိုက်တာပေါ့
မိန်းမတွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ချင်စိတ် အညှိုးအာဃာတ တွေများ တယ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတာကလား
ဒါနဲ့ အခုစာထဲက ဝတီလေးက အပြင်မှာ မွန်မွန် ဆိုတာပေါ့နော်
မောင်ပေ မွန်မွန့် ကို ဂျစ်မိသွားပြီကွယ် ။ နောက်ဆို မွန်လေးကို ပြိုင်သမျှလူအားလုံးကို မောင်ပေ့ရန်သူပဲ
အင်း ပြိုင်ချင်စိတ်ရှိတာကောင်းပေမဲ့ မနာလိုဖစ်တတ်လာရင်တော့ မလွယ်ပါဝူးအေ။
ဆရာမကတော့တကယ့်ကိုပဲ ဘုရားနဲ့တစ်ဂိုဏ်တည်းထားသင့်တဲ့သူပေပဲနော်. အားပေးစောင့်မျှော်နေတယ်နော့.
ဂေဇက်ထဲမှာ မြန်မာစာ အရေးအသားကောင်းတဲ့ သူတွေ အတော်များပါသည်။ တကယ့် စာရေးဆရာများလား၊ အပျော်တမ်းရေးသူများလားတော့မသိ။ အခုလိုလေ့လာဖတ်ရှု့ခွင့်ရတာ အကျိုးများတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မေ့တောင်မေ့နေတယ်အေ ညည်းနှယ့် ဝေးလိုက်ထာ နောက်ဆို နဲနဲကပ်ကပ်လေးတင်ပါအေ…
သူလဲ ကိုရီးယားကားကျနေတာပဲ ကောင်းခန်းဆို ဖြတ်ပီ ဟွန်.
တင်ချင်ပါတယ်ရှို..သများက စာမေးပွဲကြီးရှေ့ထားပြီး စာမကျက်ဘဲ ရေးနေတာ… ဖြစ်နိုင်ရင် အပြီးကို တင်ချင်တာ… ဟင့်.. နိုချင်လာဘီ…
တကယ်တော့ သူငယ်တန်းကနေ ဆယ်တန်းနှစ်အထိ..နောက် အခုအချိန်အထိ..ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို အခြေခံပြီးရေးမှာဆိုတော့ စာဖောင်းပွမှာစိုးတာတစ်ကြောင်းကြောင့် သေသေချာချာလေး ရေးနေတာလည်း ပါပါတယ်…နောက်ပြီး အချိန် (တရုတ်ကြီး မဟုတ်။ ကြေးမုံဂျီးနဲ့ အမျိုးမတော်) မလောက်မငဖြစ်နေတာကြောင့် သည်းခံပေးဖို့ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ချင့်… အားပေးမှုအပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ရှိပါတယ်…
ရပါတယ် ရပါတယ် အန်တီမမ မွန်ရယ် ခိခိခိ
အလုပ်မလုပ်ပဲ MG ပဲဝင်နေတယ်ပေါ့လေ .. ဟိ…
ဒါပေမယ့်ညီမလေးရေ … ဒါလေးပြီးအောင်ရေးပြီးရင်တော့.. အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့လိုက်ပါတော့လို့။ မပင်ပန်းစေချင်လို့ပါကွယ်။
အဲလိုပေါ်တင်ကြီး မပြောနဲ့လေ.. ရှက်တာပေါ့လို့…